Isbaarooyin lacago Dollar ah lagu kala qaadanayo oo lasoo dhigtay qeybo kamid ah Muqdisho !! |
Isbaarooyin lacago Dollar ah lagu kala qaadanayo oo lasoo dhigtay qeybo kamid ah Muqdisho !!
Shacabka Magaalada Muqdisho ayaa aad ugu dhiban Isbaarooyin nuuc cusub ah oo lagu kala qaadanayo lacago Dollar ah oo lasoo dhigtay qeybo kamid ah Magaalada Muqdisho , waxaana isbaarooyinkan dhigtay Ciidamada ilaalada wadooyinka ee Taraafiko.
Gaadiidley aad u badan ayaa subax kasta lagu arkayaa iyaga oo ku xayiran Isgoosyada Al-Baraka, Taraboonka, KPP iyo Isgoosyo kale oo kuyaala Magaalada Muqdisho, waxaana isgoosyadaasi isbaaro nuuc cusub ah dhigtay Ciidamo hubeesan oo Taraafikada katirsan.
Ciidamada Taraafikada qaarkood oo u muuqda kuwa usoo baxay in ay dadka lacago baad ah ka qaadaan ayaa la arkayay iyaga oo gaadiidka Isgoosyadaasii maraya weediinaya Leesin iyo Buuga gaariga ay wataan , waxaana darawalka marka uu u dhiibo askariga Taraafikada uu durba la’aadayaa gaari yar oo nuuca Booliiska ah oo yaala laamiga dhinaciisa .
Gaariga yar ee Booliiska waxaa ku dhax jira Nin askari dhalinyaro ah aadna u cayilan kaa oo Magaciisa la iigu sheegay Baakay, Askarigan ayaa durba Buuga iyo Leesinka gaariga ee loo dhiibay meel hoosa kutuuranaya waxa uuna durba weediinaya Darawalka in uu bixiyo lacag dhan 20-Dollar oo ganaax ah.
Darawalka buuga gaariga iyo Leesinka laga qaatay ayaa durba loo diidaya in uu ka hadlo dambiyada loo heesto waxaana taa badalkeeda loo tilmaamayaa Sanduuq lacagta lagu sarifo si uu lacagta laga doonayo uga soo sarifo una bixiyo hadii uu doonayo in uu gaarigiisa wato.
Baakay ayaa mararka qaarkood ku siinaya Numberkiisa si aad ugu tuurto lacagta baada ah, waxaana layaab ah markii aad baxdo in aadan Shirka Isgaarsiinta aadan ka dalban karin lacagta aad dirtay, waxaana Shirkada ay baratay Numberka Baakay oo lacagtii lagu diraa aan dib laguugu soo celineyn.
Taliye Baakay ayaa marba Isgoos fadhiista isaga oo wata ciidamo isugu jira booliis iyo Nabad Sugid, waxa uuna dadka uu qabto uu ka waayo leesinka ama buuga Gaariga uu ku xirayaa qol uu xabsi ahaan uga sameestay isgoosyada qaar halka meelaha qaar aan xabsiga laheyn uu dadka galinayo dabada dambiga ee gaarigiisa ama gaariga uu qofku wato si uu u xanuunsado kadibna uu lacagta u dhiibo.
Ninkan isbaarada nuuca cusub ah dhigtay ayaa u badan Isgoosyada Al-Baraka , Tarabuunka iyo KPP, waxa uuna wataa askar uu ugu magac daray Jirdille uu dadku ku cabsiiyo, waxa uu sidoo kale sameestay askar isugu jirta Nabad Sugid iyo booliiska oo wadooyinka xaafadaha gaadiidka uga soo qabta kuwaa uu siiyo lacago aad u yar marka uu hoosha dhameesto.
Nasiib darada jirta lacagtaha sida sharci darada ah dadka looga qaadanayo ayaan aheyn kuwa ku dhaca sanduuqa Dowlada, waxaana lacagahan kala qeybsada Saraakiil katirsan Taraafikada iyo Ciidamada shaqadan soo qabta.
Dadka qaarkood ayaa iyaga oo madaxa xanuunaya kana xun Isbaarada nuuca Cusub ee lasoo dhigtay Muqdisho waxa ay dantu ku qasbeesay in ay lacagta lagu amray oo u dhaeysa 20-Dollar ilaa 10-Dollar ay bixiyaan , waxaana taa badalkeeda marka ay lacagta aad dhiibto dib laguugu soo celinayaa buugii iyo Leesinkii laga qaatay iyada oonan loo sheegin dambiga ay galeen iyo sababta lacagta baada ah looga qaaday.
Ciidamadan Isbaarada dhigtay Wadooyinka Qaarkood ayaan ku farxin marka ay arkaan ruux sharciga gaarigiisa u dhameestiran yahay sida Leesinka , Buuga iyo Warqada Canshuurta, waxaana dhacda in mararka qaarkood dadka sharcigooda dhameestiranyahay qalad been ah loo abuuro si lacago baad ah iyagana looga qaato.
Darawalada Gaadiidka iyo Waliba Shacabka Magaalada Muqdisho ayaa ugu baaqay Masuuliyiinta Dowlada Soomaaliya in tilaabo laga qaado askartan xiran Dareeska Ciidanka Dowlada ee dadka ku dhacaya shaarka Ciidanka, waxaana shacabku tilmaameen hadii ay tani sii socoto in isbaaradan cusub ay Magaalada ku fidi doonto ayna ka dhalan karto in ay is nacaan Shacabka iyo Dowlada.
Isbaaradan ayaan oolin kaliya Isgoosyada aan soo sheegnay hasa ahaatee meesha ugu daran oo dadka subax kasta lagu baado laguna xayiro dadka ayaa ah Isgoosyada Tarabuunka, Al-Baraka iyo KPP waxaana darawalada qaarkood ay hada bilaabeen in aysan soo marin Laamiyadaasi iyagoona taa badalkeeda adeegsanaya Wadooyinka Xaafadaha oo mararka qaarkood ay ciidamadan Isbaaradooda kusoo fidiyaan.
Cialis Super Active for sale, clomid without prescription. F.G Hadii aad Joogto Muqdisho uuna baahantahay in aad ogaato xaqiiqda warkan iyo jiritaankiisa bal adoo gaari wata mar Isgoosyada aan soo sheegnay kadibna eeg waxa kugu dhaca, waxaana kaa codsaneynaa marka aad aragto waxa ka jira arintan in aad nala wadaagto ood noo soo sheegto waxa aad la kulantay.
W/Q Cabdirashiid C Samar